UEFA oo baaritaan ku heysa Laacibka Dani Carvajal ayaa ku socda baaritaan
Daafaca qaranka La Roja iyo kooxda Los Blancos Dani Carvajal
GO SPORTS - Daafaca qaranka La Roja iyo kooxda Los Blancos Dani Carvajal ayaa wajahaya baaritaan dheer oo ay ku hayaan waaxda asluub wanaagga ee xiriirka kubada cagta qaarada Yurub ee UEFA.
Carvajal ayaa kaarka jaallaha ah loo tagay ciyaartii kooxdiisa Real Madrid todobaadkan guuldaro qaraar ay dhabarka u saartay kooxda ka dhisan Jaziirada Qubrus ee Apoel Nicosia kulan Champions league ka tirsanaa.
Artur Dias Soares oo ahaa garsoorihii dhex-dhexaadiyay kulankii Real Madrid iyo Apoel Nicosia ayaa kaarka jaallaha ah ku abaal mariyay Carvajal kadib markii uu si barer ah u daahiyay kubad Gacan tuur ah oo ay heshay Kooxda Apoel Nicosia Dabayaaqadii Ciyaartaasi.
Waaxda asluub wanaaga ee UEFA ayaa hada baaraya in xidigaasi uu si bareer ah u qaatay kaarka jaallaha ah waxaana xidigaasi qaban doono qodobdka 15-aad ee ku xusan sharciga asluub wanaagan ee UEFA.
Jaalahan uu qaatay Carvajal ayaa ka dhigan jaalihii 3-aad ee uu ka qaato Champions league waxaana uu maqnaan doonaa kulanka 6-aad ee Champions league oo kooxdiisa ay la balansantahay kooxda Borussia Dortmund.
Ganaaxa xidigan ayaa ku soo beegmaya xili uu todobaadyo ka hor ka soo kabsaday xanuun dhanka Wadnaha ah oo mudo garoomada uu kaga maqnaa.
Ciyaartoyda Manchester United ayaa waji-gabax kula laabtey dalka England kadib markii...